Ogaden News Agency (ONA) – Xogta Aan ka Hayno Gacan-ku-dhiigle Haajir – Indheergarad
Xogta Aan ka Hayno Gacan-ku-dhiigle Haajir – Indheergarad
Ninkan danbiileha ah ee lagu qabtay hadda Gaarisa, Cabdi rahman Haajir, waxuu sanadihii u danbeeyay fulinayay dilalka qorshaysan ee loo gaysanayay dadka shacabka ah ee ka qaxay Ogadenya. Wuxuu ninkan si toosa uga shaqaynayay dalka Kenya, magaalooyinka Xamar, Balad Wayne, Guri ceel, saldhigiisa wayna wuxuu ahaa Mooyaale.
Hada markuu sii anbabaxayay waxaa sagootiskiisii iyo hagidiisiiba waday sirdoonka Itoobiya iyo Cabdinur yare oo xidhiidhinta Kenya kala shaqaynayay, iyo Mukhtaar suubane oo u diyaarinayay taakulaynta iyo saanadda.
Sawirkan lagu soo bandhigay QOL (Akhri), ninka ag fadhiyaa waa Hogaan ku-xigeenka waxay ugu yeedhaan Nabad galiyada Mohamed Hasan ( Dhoodhe) oo ah nin sirdoon ka ay soo tababarayeen mudo.
Xogta kalee aan ka helnay waxaa ka mid ah intuusan soo ambixin inay koox uu ku jiro galeen tababar 45cisho ah, halkaasoo ay ku qaateen habka loo khaarijyo dadka iyo sida looga baxsado goobta uu falka ka dhacay intaanu booliska soo gaadhin. Ninkan wuxuu ka mid ahaa kooxihii lasoo xarooday Salaaxudiin ka dibna muujiyay colaad gaamurtay inuu u hayo dadka muwaadiniinta ah ee diidan gumaysiga.
Waxay wararku intaa ku darayaan in magaalada Boorame loo diray isla waqtiyadaa ninka lagu magacaabo Maxamad Faaruuq Sheekh oo dambiile Haajir saadigii ah, isku waqtina ay xaroodeen.
Qabashada la qabtay gacan-ku-dhiigle Haajir ayay walaac badan ka muujiyeen ragii amarka siinayay, waxayna hadda dadaal ugu jiraan sidii loo yareyn lahaa dhibka soo gaadhay mashruucii dilalka qorshaysan ahaa. Waxaa ka mid ah qorshahaa in saxaafaddaKenyala jahawareeriyo oo hadallo iska horimanaya laga faafiyo, si dadweynaha Somaliyeed eeKenyaloogu jaheeyo hadafkii laga lahaa mashruucan oon ku daba jirno soo ururintiisa.